Xiddig muhiim ka ah Real Madrid oo ogolaansho ka helay Florentino Perez, si uu u baxo suuqa xagaaga ee soo aaddan – Gool FM
(Madrid) 10 Okt 2019. Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez ayaa u ogolaaday mid ka mid ah xiddigaha muhiimka ah ay ku taagan tahay kooxda inuu isaga dhaqaaqi karo garoonka Santiago Bernabéu, maadaama uu isaga sidaas codsaday, sida ay wararku xaqiijinayaan.
Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa lagu soo waramayaa inuu ogolaansho ka helay madaxweynaha Los Blancos ee Florentino Perez, si uu kaga dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabéu suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo aaddan.
Shabakada caalamiga ah “Don Balón” ee dalka Spain ayaa waxay shaaca ka qaadday in Sergio Ramos uu ka codsaday Madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez inuu baxo xagaaga soo aaddan, iyadoo jawaabta la siiyay ay noqotay mid ogolaansho ah.
Wararka ayaa waxa ay intaa ku darayaan in Sergio Ramos uu doonayo inuu u dhaqaaqo horyaalka Japan xilli ciyaareedka soo socda, si uu halkaas kula biiro saaxiibadiis reer Spain ee David Villa iyo Andres Iniesta, taasoo la micno ah in Kabtanka Los Blancos uu ku gudi jiro maalmihiisa ugu dambeeya ee garoonka Santiago Bernabéu.
Ramos ayaa wuxuu la qaaday xulkiisa qaranka Spain labo koob oo Euro ah, wuxuu sidoo kale kula guuleystay Koobkii Adduunka ee 2010, laakiin kooxdiisa Real Madrid ayuu kula guuleystay wax kasta ee isugu jira koobabka gudaha, Yurub iyo kuwo caalami ah.
Waxaa xusid mudan in Sergio Ramos kulankii Granada uu u ciyaaray Kooxda Real Madrid uu ahaa kulankiisii 427-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain.